निजी प्रयोगशालाले पीसीआर परीक्षण गर्न पाउने, नि:शुल्क परिक्षण #covid19 • Health News Nepal
भिसा तथा निरोगिताको प्रमाणपत्रका लागि पीसीआर परीक्षण गराउनु परेमा पाटन, वीर र त्रिवि शिक्षण अस्पतालको प्रयोगशालामा, रु.५,५०० परिक्षण शुल्क
Covid 19 PCR test provisioned for private lab in Nepal
नेपाल सरकारले निजी प्रयोगशालामा समेत पीसीआर परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आज मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै निजी प्रयोगशालामा समेत पीसीआर परीक्षणमा सहभागी गराउन लागेको हो । उक्त निर्णयमा पीसीआर परीक्षण शुल्क समेत तोकिएको छ । पीसीआर परीक्षण शुल्क स्वास्थ्य मन्त्रालयले बेहोर्ने भएको छ।
सरकारले निजी प्रयोगशालाहरुलाई पनि कोरोना संक्रमण परीक्षण गर्न दिने भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पीसीआर टेस्टका लागि संकलन भएका नमुना आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी निजी प्रयोगशालालाई पनि जाँच्न दिइनेछ । प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले यसरी जाँच गर्दा लाग्ने खर्च सरकारले व्यहोर्नेछ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले अहिलेलाई निजी प्रयोगशालामा सरकारले संकलन गरेका नमूना मात्रै परीक्षण गराउने निर्णय भएको बताए । ‘
हामी निजी प्रयोगशालामा पनि परीक्षण गराउँछौँ र प्रतिकेश रु ५५०० को दरले भुक्तानी गर्नेछौँ,’ उनले भने । उनले क्वारेन्टाइनमा रहेका र सरकारले नमूना संकलन गरेका सबैको सरकारले नै परीक्षण गर्ने स्पष्ट पारे । ‘
फेरी सर्वसाधारणको लागि पैसा तोकियो भनिएला, त्यस्तो होइन क्वारेन्टाइनमा रहेकाहरुको जो हामीले नै पीसीआर परीक्षणका लागि नमूना संकलन गरेका छौँ । हामीले ल्याव मात्रै निजीको प्रयोग गर्न लागेको हो । तर खर्च सरकारले नै बेहोर्छ ।
कसैमा भ्रम नहोस्,’ उनले भने । डा. गौतमलले यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न चाहने प्रयोगशाला विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्ड पुरा हुनुपर्ने र राष्टिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले प्रमाणित गरेको हुनुपर्ने बताए ।
आजको बैठकले भिसा तथा निरोगिताको प्रमाणपत्रका लागि पीसीआर परीक्षण गराउनु परेमा पाटन, वीर र त्रिवि शिक्षण अस्पतालको प्रयोगशालामा रु ५५०० तिरेर गर्न सकिने व्यवस्था समेत गरेको उनले जानकारी दिए ।